Caafimaadka ayaa sifiican ula socon doona caafimaadkeena iOS 15 | Wararka IPhone
Codsiga Caafimaadka waa barta Apple Watch gaar ahaan ku meeraysto waana habka ay adeegsadayaal badani u soo bandhigaan si ay ugu raaxaystaan ​​awooddeeda, waana sababta shirkadda Cupertino ay usii waddo inay si xoogan ugu sharaddo hagaajinta waxqabadka arjiga Caafimaadka illaa inta laga gaarayo noqoshada soo jiidasho leh "ciyaartooyda" maadaama ay ka dhigan tahay bedel dhab ah saacadaha kale ee gaarka ah.
Apple waxay kudarsatay sedex waxqabad arjiga caafimaadka ee looyaqaano: Mobility, Labs and Walking Steadyness taas oo noo ogolaaneysa inaan sifiican ufahamno xaalada jirkeena. Sidan oo kale, natiijooyinka cabbiraaduhu waxay noqon doonaan kuwo aad iyo aad u saxsan waxayna noo oggolaan doonaan inaan horumarino waxqabadka.
cunt Dhaqdhaqaaqa Waxaan dooneynaa inaan helno talooyin fara badan markay tahay jimicsiga taasna waxay naga caawin kartaa inaan qaab ahaan ku jirno markii aan u baahanahay inta badan, Apple oo hadda la socota Caafimaadka kaliya nama xusuusin doonto xaaladdeena jireed, laakiin waxay naga caawin doontaa inaan ku horumarinno si bilaash ah iyada oo loo marayo taxane taxane ah iyo falanqeyn ku saabsan sida aan ugu dhaqaaqno nolol maalmeedka.
Sidoo kale, Socod joogto ah Waxay naga caawin doontaa annaga oo falanqeyna xogta dhaqdhaqaaqayaga, gaar ahaan sida aan nahay. Sidan oo kale, waxay ku xisaabtami doontaa oo keliya tillaabooyinka, laakiin sidoo kale dhererkooda, xawaaraha aan ku qaadanayno iyo haddii qaafiyadda u socoto. Xaqiiqdii waxay noo ogolaaneysaa inaan ka helno natiijooyin sax ah "socodkeena".
Dhinaca kale, iyadoo la adeegsanayo Shaybaarada arjiga caafimaadka ayaa soo bandhigi doona macluumaadka gorfayntayada ee dalalkaas oo sheybaarradu ay "ka shaqeeyaan". Si la mid ah, hadda waxaan awood u yeelan doonnaa inaan helno ogeysiisyo iyo macluumaad ku saabsan waxqabadka ehelkeenna si looga caawiyo inay caafimaadkooda ku horumariyaan iyadoo loo marayo talooyinka Apple. oo markaa aan hagaajino kaliya isticmaalka aan u isticmaalno arjiga Caafimaadka, laakiin sidoo kale waxaan horumarinaynaa kuwa aan jecel nahay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » WWDC 2021 » Caafimaadka ayaa sifiican ula socon doona caafimaadkeena iOS 15
Apple ayaa siisay wax lala yaabo waxayna bilawday iCloud + WWDC 2021